news2dago | Martsa 2009
[Ankapobeny ] 27 Martsa, 2009 09:05
Mihetsiketsika ny sezanla!!!
Mbola misahotaka ireo gadra nahazo famotsoran-keloka. Ankehitriny ary misy efa may vava be sahady ry zalahy milaza fa mpandainga ity fitondrana tetezamita ity. Izao no atao oe mitady raharaha ka hahita e!
Ny fahitako ity mpitondra ny tetezamita ity dia hadedahana no betsaka fa TSY misy risim-po sy fitiavan-tanindrazana. Dia izao no vokany basin'arifito hoy ny fitenenena.
Tenenina foana fa eeeeeeeeeeeeeeeeee! Misy fetrany ny zavatra azo vidim-bola e! Sa hividy vola ireo communauté internationale koa. Mbola ho henjana ny lalao e. Ny capsat no mety azo tambazana vola fa ny hafa kosa angamba tsy poinsa e.
Dia notapahina daholo ilay tombotsoa kely ny mpiasam-panjakana! hatramin'ny fisondrotan-karama aza dia lazaina fa tsy ho zaka fa tsy misy ny vola. Te hanao aminy eo ka mandoa lanitra e! Areheto ny tanimena sy izay rehetra mety azo hatao fa mety tsy hateza ilay fitondrana raha izao no mitohy.
Ho avy i dada rehefa tsy hainareo ity tantara ity koa. Miombo isan'andro tokoa ireo olona etsy ambohijatovo ary tsy hay tohaina izy ireo. Hisy raharaha eto @ io asabotsy sy alahady io.